Nico Nico Douga Khuphela - Ukukhuphela simahla iividiyo ze-anime ezivela kuNiconico
Usebenzisa uhlobo oludala. Cofa apha ukufaka inguqulelo yamva nje 2.0.1
Nico Nico Douga Khuphela
❝Ukukhuphela simahla iividiyo ze-anime ezivela kuNiconico❞
➶ Le ndawo ikuvumela ukuba ukhuphele nayiphi na ividiyo yeNiconico ngokungena kwi-URL yevidiyo.
Khuphela i-URL yevidiyo kwaye unamathisele kwibhokisi engasentla, emva koko uNiconico wokukhuphela uza kuyifumana ngokukhawuleza ividiyo. Cofa ekunene kwikhonkco lokukhuphela kwaye ugcine iividiyo zeNiconico kwidisk yendawo.
Ukhuphelo olulula lweNicoNico
Olu lwandiso lukuvumela ukuba ukhuphele iividiyo, iaudiyo, imifanekiso yeNicoNico. ➥ Faka ngoku
Indlela yokukhuphela iividiyo zeNicoNico
Ndiyakwazi ukukuxelela ukuba ungumlandeli omkhulu weNiconico anime kuba ufumene indlela yakho apha. INiconico yeqonga elihle lokwabelana ngevidiyo eJapan, inikezela amawaka evidiyo anomdla kwaye amangalisayo. Nangona kunjalo, sinokubukela kuphela iividiyo zeNiconico kwi-intanethi kwaye kunzima ukukhuphela ividiyo yeNiconico kunye nevidiyo ngeendlela ezisemthethweni. Ngenxa yeso sizathu, sikunika indlela yokukhuphela ividiyo yeNiconico kunye nevidiyo ngeyona nto ilungileyo yokuNika iNiconico Video Onlineer.
Ngena i-URL yeVidiyo yeNicoNico kwaye ucofe iqhosha Lokukhuphela.
Khuphela Simahla iVidiyo kwiNiconico ngeBrowser Extension / iSongezelelo
Dlala ividiyo kwiNicoNico. Guqula umgangatho wevidiyo kumdlali ukuze ufumane ikhonkco lokukhuphela.
Vula olu lwandiso.
INiconico, eyayisaziwa njengeNico Nico Douga, yindawo edumileyo yokudluliselwa kwevidiyo yaseJapan apho kukho iindlela ezininzi zevidiyo, ezinje ngeZolonwabo, uMculo, uBomi, iMidlalo, iAnime, ubuGcisa, iMidlalo njalo njalo. Ukongeza ukubukela, ukulayisha, kunye nokwabelana ngeevidiyo, eyona nto iphambili kwiNicovideo kukuba kuvumela abasebenzisi ababhalisiweyo ukuba bathumele isikrini sokubhala, amagqabantshintshi aboniswe ngqo kwividiyo kwaye avumelaniswe kwixesha elithile lokudlala, elikhokelela kwifashoni.
Ukukhuphela ividiyo yeNiconico
INiconico (nicovideo.jp) yenye yezona ndawo zityeleliweyo zokwabelana ngevidiyo eJapan. Sibeke umzamo omkhulu kule Nokhumenti yeNovovideo, yiyo loo nto unokukhuphela nayiphi na ividiyo kwiNiconico ngemizuzwana. Nceda uqaphele ukuba zonke iifayile ezikhutshelweyo zenzelwe umntu ukuba azisebenzise.
Khuphela ividiyo ephezulu yeNiconico ividiyo
Khuphela iividiyo ezivela kwiNiconico esemgangathweni ophezulu. Khuphela iifilimu zeAnime zasimahla kunye neeVidiyo ze-Anime kwi-NicoVideo ngaphandle kokukhangela.
Chwetheza amagama aphambili kwibha yokukhangela, ividiyo yeNiconico ehambelana nayo iya kubonisa. Gcina iividiyo zakho ozithandayo zeNiconico ukuze zisetyenziswe ngaphandle kwesixhobo ngezixhobo ezilula.
UNiconico Downloader usebenza kakuhle kwiGoogle Chrome, Firefox, IE, Opera, Safari, Microsoft Edge, UC Browser kunye nakuphi na ukukhangela iwebhu. Ukongeza, iyahambelana kakhulu nenkqubo yokusebenza kweMac.
Gxotha iaudio kwiNico Nico Douga kwaye uyigcine.
Khuphela i-NicoNico thumbnail
Khuphela iNicoNico epheleleyo ubungakanani 720p.
Fumana iMibuzo yakho kunye neempendulo Apha- Ungayikopa njani iVidiyo yeNicoNico?
+ Yintoni uNicoVideo?
UNiconico (okwabizwa ngokuba yiNicoVideo okanye uNikoniko) ngaphambili wabizwa ngokuba nguNico Nico Douga. Kuyafana nakwiYouTube, yindawo yokwabelana ngevidiyo eyaziwa eJapan. U-Nikoniko okanye uNiconico uthetha ukubetha ngesiJapan.
+ Unokukhuphela njani ividiyo ye-Anime kwiNicovideo?
Ngaba ufuna ukubukela iividiyo ze-anime ngaphandle kweintanethi? Unokukhuphela iividiyo ze-anime kwiNiconico. INiconico yenye yezona webhusayithi ze-anime eJapan.
Le webhusayithi ineendlela ezininzi kubandakanya i-Anime, Vocaloid, Ukuzonwabisa, kunye noMculo. Kule webhusayithi, unokuhlala ufumana iifilimu ze-anime ezithandwa kakhulu, uthotho lwee-anime kunye neevidiyo ze-anime ukubukela simahla, kubandakanya iNaruto Shippuden, i-One Piece, iBleach, iDrike Ball Z, iThail Tail, Skip Beat, Shugo Chara, Fullmetal Alchemist kunye nokunye. Kwaye, iNicoNico yeyona ndawo yeNo.1 yokufumana iingoma ezintsha kakhulu zeVocaloid ezenziwa ngabavelisi baseJapan.
Ukuba ufuna ukukhuphela iNicovideo ukubukela ngaphandle kwe-intanethi nangaliphi na ixesha kwaye naphi na, kuya kufuneka ufumane iNerovideo Downloader yokuqala. Apha sazisa okona kukukhuphela ividiyo yasimahla yeNicoNico.
+ Ungayikhuphela njani i-NicoVideo kwiMac ngaphandle kokuPhulukana noMgangatho?
Umkhupheli wethu weNicoNico uya kukunceda ngokuzenzekelayo ukudibanisa iifayile ukugcina ividiyo epheleleyo ye-10 10p ye-HD ngaphandle kokulahleka komgangatho.
+ Unokukhuphela njani iiNgoma zeAnime kwiNicoVideo (Nico Nico Douga)?
I-NicoVideo okanye ngokulula i-NicoNico, yeyona ndawo yabelwana ngevidiyo ekwabelwana ngayo ngeJapan efanayo kwiYouTube apho abasebenzisi banokujonga iitoni zeevidiyo zokuzonwabisa. Yintoni umahluko weNicoVideo kwiYouTube kukuba uninzi lomxholo kwiNicoVideo lugxile kwinkcubeko yeJapan pop (i-anime, ividiyo-imidlalo, iividiyo zomculo waseJapan pop njl.).
Ngamaxesha ngamaxesha, kwiNicoNico, kukho ezimbalwa iividiyo zomculo ze-anime ezineengoma ze-anime ngazo ozithandayo kwaye ufuna ukubeka kumdlali wakho we-MP3 okanye ukutshisa kwi-CD. Kodwa ezinye zezi zahlukile kwaye akusoloko kunokwenzeka ukuba ukhuphele ingoma ngokwayo.
Zininzi izisombululo ezahlukeneyo kunye neendlela zokukhuphela iividiyo zomculo kwiNicoVideo kodwa eyona nto uyifunayo sisiguquli seNicoNico MP3 esikuvumela ukuba ukhuphele iitayile zomsindo kunye zomculo kwindawo yevidiyo yaseJapan eyaziwayo.
+ Ungawugcina njani uMgangatho ophezulu weaudiyo kuNicovideo?
Umkhupheli weNicovideo uya kufumana ngokuzenzekelayo kwaye akhombise ikhonkco lomgangatho we-192kbs wokukhuphela imisindo ekhoyo kwiwebhusayithi yeNicovideo.
+ Kuthekani ukuba andinako ukukhuphela iVidiyo kwi-nicovideo.jp?
Ukuba awukwazi ukukopa iividiyo zeNico Nico Douga ngqo, ungasebenzisa isoftware yokurekhoda ividiyo ukurekhoda iiklip zevidiyo ozifunayo.
+ Ngaba ndingadlala iVidiyo eKhuphelweyo kwisixhobo sam?
Ngokubanzi, umkhupheli wevidiyo uya kukhuphela iividiyo kwiinicovideo.jp ukuya kwiifayile zevidiyo zeMP4, kwaye uyakwazi ukudlala iividiyo ezikhutshelweyo kwisixhobo sakho esiphathwayo ngaphandle kwengxaki.
+ Ngaba ndingabaNako ividiyo ekhutshelweyo kunye nabahlobo bam?
Emva kokukhuphela iividiyo ku-nicovideo.jp, unokuthatha kuphela iividiyo ozisebenzisela wena, kodwa ungazidibanisi naye kwinethiwekhi yoluntu okanye uyithumele ngokuthe ngqo komnye umhlobo.
+ Ngaba ukukhuphela iVidiyo kugcina nayiphi na ikopi yeVidiyo eKhutshelweyo?
Indawo yokukhuphela ividiyo, usetyenziso okanye inkqubo, ayigcini naliphi na ikopi lefayile osele uza kuyikhuphela. Emva kokukhuphela iividiyo, unokwenza ikopi yevidiyo ngokwakho.
+ Kusemthethweni na ukukhuphela iividiyo ku-nicovideo.jp?
Kuxhomekeka kwimigaqo kunye neemeko ze-nicovideo.jp. Iividiyo ezingenalo ilungelo lokushicilela, abasebenzisi banokuzikhuphela ukuze zisetyenziswe ngokulula; Iividiyo ezikhuselwe ilungelo lokushicilela, kuya kufuneka abasebenzisi bacele imvume kumnini wevidiyo.
+ Ungayikhuphela njani ividiyo ye-niconico njenge-mp4 1080p?
UNicovideo akaboneleli ngevidiyo eyi-1080p epheleleyo yevidiyo njengefayile enye, kufuneka ke ufake i-NicoNico downloader yokukhuphela iividiyo njenge-mp4 1080p.
+ Ngaba kunokwenzeka ukuba ukhuphele iividiyo / mp3 kwiNicoNico Douga?
Faka i-NicoNico downloader, unokukhuphela ividiyo oyibukele kwiNicovideo. Nangona kunjalo, kufuneka ungene ngemvume ukuze ukwazi ukubukela uthotho lwe-anime kwaye ube neakhawunti ye-premium yokubukela iividiyo ezisemgangathweni ze-HD.
+ Yintoni uNico Live?
I-Nico Live yinkonzo yokusasaza ye-intanethi ebukhoma apho abasebenzisi banokubukela kwaye basasaze iinkqubo zokuphila kunye nokuthumela kunye nokujonga izimvo zonke ngexesha langempela.
+ Uyikhuphele njani ividiyo ye-NicoNico kwi-Android Smartphone okanye kwi-Iphone, Ipad?
Ukuba usebenzisa ifowuni ye-Android, unokufakela ulwandiso lweNicoNico yokukhuphela iFirefox. ➥ Faka ngoku
Ukuba usebenzisa i-iPhone okanye i-iPad, kufuneka ufake ikhonkco leNicovideo kwibhokisi yokufaka ephezulu.
Umkhupheli weNiconico kwi-Intanethi- Khuphela ividiyo yeNiconico kunye nevidiyo ukuya kwi-MP4 / MP3 mahala
Kwiminyaka yakutshanje, abantu abaninzi bakhalaza ukuba bahlala behlangabezana nemicimbi efana nokuhlaselwa kwenethiwekhi okanye ukuxinana, umgangatho wevidiyo ophantsi, izithintelo ezahlukeneyo, njl njl njl amava amabi omsebenzisi. Ke, abantu banomdla wokufumana isisombululo sokukhuphela iividiyo zaseNiconico ukuze bonwabe ngokungaxhunyiwe kwi-intanethi! Unethamsanqa lokuba lapha.
Ndicinga ukuba ilula, ilula kwaye ilunge kakhulu. Ingcono kuneNicofox.
Isixhobo esihle sokundinceda ukukhuphela kunye nokugcina uthotho lwe-anime kwingqokelela yam.
Olu lwandiso lundivumela ukuba ndikhuphele ingoma kwiNico Nico Douga lula.
Ukukhuphela ividiyo yeNiconico 2022